Iindaba-Yintoni efunekayo kwimveliso ye-PCB yakho
Ukuhlangabezana neemfuno ezingakumbi ezivela kwiinjineli ezahlukeneyo ze-elektroniki, iitoni zesoftware yoyilo kunye nezixhobo ezibonakalayo kubo ukuba bazikhethe kwaye bazisebenzise, ​​ezinye zezasimahla. Nangona kunjalo, xa ufaka iifayile zakho zoyilo kumenzi nakwi-PCB yeeNdibano, unokuxelelwa ukuba azifumaneki ukuba zingasetyenziswa. Apha, ndiza kukwabelana ngeefayile zePCB ezisebenzayo zemveliso yePCB kunye nokuhlangana.
1. Iifayile zoyilo zeMveliso yePCB
Ukuba ufuna ukuvelisa iiPCBs, iifayile zoyilo lwePCB ziyimfuneko, kodwa loluphi uhlobo lweefayile ekufuneka siluthumele ngaphandle? Ngokubanzi, iifayile zeGerber ezinefomathi ye-RS- 274- X zisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso ye-PCB, enokuvulwa sisixhobo sesoftware yeCAM350,
Iifayile zeGerber zibandakanya lonke ulwazi lwePCB, ezinje ngesekethe kulwaleko ngalunye, umaleko wesiliksi, umaleko weCopper, umaleko weSolder mask, Uluhlu lweNC drill ... iimfuno zakho
2. Iifayile zeNdibano yePCB
2.1 Ifayile yeCentroid / iPick & Indawo yeFayile
Ifayile yeCentroid / iPick & Place File iqulethe ulwazi malunga nokuba icandelo ngalinye kufuneka libekwe ebhodini, kukho u-X kunye no-Y wokulungelelanisa icandelo ngalinye, kunye nokujikeleza, umaleko, umyili wesalathiso, kunye nexabiso / iphakheji.
2.2 IBill yezixhobo (BOM)
I-BOM (iBhili yezixhobo) luluhlu lwazo zonke iindawo eziza kuhlala nabantu ebhodini. Ulwazi oluku-BOM kufuneka lwanele ekuchazeni icandelo ngalinye, ulwazi oluvela kwi-BOM lubaluleke kakhulu, kufuneka luzaliseke kwaye luchaneke ngaphandle kwempazamo.
Nalu ulwazi oluyimfuneko kwi-BOM: Inombolo yesalathiso. Inombolo yendawo. Ixabiso lesahlulo, Olunye ulwazi olongezelelekileyo luya kuba ngcono, njengokuchazwa kwezahlulo, imifanekiso yamalungu, ukuveliswa kwamalungu, ikhonkco lendawo ...
2.3 Imizobo yeNdibano
Umzobo wendibano uyanceda xa kukho ingxaki yokufumana indawo yazo zonke izinto kwi-BOM, kwaye kuyanceda ukuba injineli kunye ne-IQC ijonge kwaye ifumane imicimbi ngokuthelekisa neePCB ezenziwe, ngakumbi ukuqhelaniswa kwamanye amacandelo.
2.4 Iimfuno ezizodwa
Ukuba kukho naziphi na iimfuno ezizodwa ekunzima ukuzichaza, ungayibonisa nakwimifanekiso okanye kwiividiyo, Iya kunceda kakhulu iNdibano yePCB.
Uvavanyo lwe-2.5 kunye neNkqubo ye-IC
Ukuba ufuna umvelisi wakho avavanye kwaye enze inkqubo ye-IC kumzi-mveliso wabo, Iyafuneka kuzo zonke iifayile zenkqubo, indlela yenkqubo kunye novavanyo, kunye novavanyo kunye nesixhobo senkqubo esinokusetyenziswa.
Ukuba kusekho amathandabuzo kwimveliso ye-PCB nakwindibano, Apha, i-PHILIFAST iya kukubonelela ngeenjineli ezinamava kubacebisi bakho